संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञा – Himalitimes
संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञा
२०७८ बैशाख १४ ०७:२२ मा प्रकाशित
काठमाडाैं। सरकारले केही अत्यावश्यक सेवालाई छोडेर वैशाख १६ गतदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको छ। उपत्यकाबाहिर पनि २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ।
जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नागरिकबाट अटेरी भएपछि बाध्य भएर निषेधाज्ञाको सहारा लिनुपरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिम सकिएको छैन, मापदण्ड पालना गर्नू भनेको भनै गर्‍यौं तर अटेरी गर्ने धेरै भए। बाध्य भएर निषेधाज्ञा रोज्नुपर्‍यो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने।
तीव्ररूपमा फैलिरहेको संक्रमणले हुन सक्ने क्षतिबाट बचाउन निषेधाज्ञाबाहेक अन्य उपाय नभएको डा. गौतमले स्पष्ट पारे। ‘हरेक व्यक्तिले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको भए निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने थिएन। सेल्फ लकडाउनमा बस्नू पनि भन्यौं, अटेरी नै भयो’, उनले भने। काठमाडौंमा जनघनत्व बढी भएको र संक्रमणको चक्र नरोकेमा भयावह रूप लिने स्थिति रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले बताए।
‘निषेधाज्ञाले मानिसको जमघट नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो। बिहे, भोज, सभासम्मेलनजस्ता जमघट हुने क्रम नरोकिएसम्म एक व्यक्तिबाट अर्कोमा कोरोना सर्ने क्रम तीव्र हुन्छ’, डा.पुनले भने। निषेधाज्ञाले संक्रमणको चक्र रोक्न सक्ने उनले बताए। जनघनत्व बढी भएकाले उपत्यकामा निषेधाज्ञा नगर्ने हो भने बढी संक्रमित हुने र मृत्युदर पनि बढी हुने स्थिति रहेको उनले बताए। ‘यसपालिको कोरोना संक्रमणले स्वरूप फेरेको छ। युवा र बालबालिकातिर संक्रमण पुगेको छ। कुन भेरियन्ट हो भन्ने विषयमा अध्ययन हुन सकेको छैन’, उनले भने।
चिकित्सकका अनुसार कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक गर्न (सर्ने प्रक्रिया रोक्न) कम्तीमा तीन साता निषेधाज्ञा चाहिन्छ। यो अवधि जनघनत्वमा पनि भर पर्छ। ‘थोरै जनसंख्या भएमा कम र बढी जनसंख्या भएमा बढी समय लाग्छ’, डा. पुनले भने। सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका कोभिड १९ उपचार संयोजक डा. प्रवीन नेपालले पनि वर्तमान अवस्थामा निषेधाज्ञाबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए।
राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरामसिनीले सरकारले समयमै नियन्त्रणका उचित उपाय अपनाउन नसक्दा निषेधाज्ञाको सहारामा पुग्नुपरेको बताए। उच्च रक्तचाप भएका, मुटुरोगी, गर्भवतीको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए। ‘यो समूहका कतिपयले गत वर्ष अस्पताल पुग्न समयमै सवारीसाधन नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। अहिले यस्तो नहोस्’, उनले भने।
निषेधाज्ञाले अहिलेको तीव्र संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सहज हुने उनको पनि विश्वास छ। यो अवधिमा लुकिछिपी अर्को जिल्ला प्रवेश गर्नेलाई कडा निगरानी गर्न उनको सुझाव छ। निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि संक्रमण दोहोरिन नदिन एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला या ठाउँमा जाँदा पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने र ठाउँठाउँमा परीक्षण बुथ राख्नाले रोग फैलिने क्रम रोक्न सकिने उनले बताए। पवित्रा सुनारले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।
डीडीसीले किसानको ३५ करोड तिर्न बाँकी
जेहेन्दार तथा अति विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री र पोशाक वितरण